Ijaji lezwe lonke - Rabi Michael Avraham
Ijaji lezwe lonke
Izimpendulo > Isigaba: Isimilo > Ijaji lezwe lonke
Umnikelo Ubuzwe eminyakeni engu-3 edlule
Urabi uwuqonda kanjani umbuzo ka-Abrahama othi ‘umahluleli womhlaba wonke ngeke enze ubulungisa’? Ingabe ukuziphatha kuyabopha ngaphandle kwesisu? Futhi uma kungenjalo, uma ukuziphatha kuyinto ebophezela kuphela ukulandela intando kaNkulunkulu, futhi ngaphandle kwayo ukuqinisekiswa kokuziphatha akunancazelo, umuntu 'angambuza' kanjani uNkulunkulu ngokuntula kwakhe ukuzithoba ekuziphatheni okuhle?
mikyab Abasebenzi Kuphendulwe eminyakeni engu-3 edlule
Yini inkinga? Ngisho noma ukuziphatha kubopha kuphela emandleni kaNkulunkulu, u-Abrahama umbuza ngokungahambisani.
Umlamuli wokugcina Uphendule eminyakeni engu-3 edlule
U-Abrahama akazi ukuthi ukhuluma noNkulunkulu.
Uyakuqonda ukuthi ukhuluma nomuntu onekhono futhi ozele ukwenza ubulungiswa. Ngakho uzama ukukhohlisa ngokuthopha ngokuhlanganisa ukunquma ukuthi siyini isenzo esifanele.
UDavid Siegel Uphendule eminyakeni engu-3 edlule
Kusho ukuthini ukungazi ukuthi ukhuluma noNkulunkulu?
Futhi nampa abantu abathathu bemi kuyo, oyedwa wabo kwakungu-H. futhi wayengazi ngaso sonke isikhathi umcimbi
ITorah isitshela ukuthi nguJehova kanye nenkulumo yakhe yangaphakathi kodwa u-Abrahama wayengazi.
Ngakho kungenzeka yini ukuthi uNkulunkulu esesimweni somuntu kuJesu ??
Uma uthola izinyoka eziyenga abantu nezimbongolo ezikhuluma kungaba noma yini.